Zvindeya muRuambanyeredzi - Wikipedia
Ruambanyeredzi Zvichadenga neZvindeya.
Makwangwani ezvichadenga zvemu Ruambanyeredzi, asi Zuva (sol), Mwedzi (luna) hazvisi zvindeya. Uye, Rinopasi (terra) hirizimo muRuambanyeredzi
MuRuambanyeredzi (Nge. astrology) zvindeya zvinoshandiswa kumirira zvinhu zvakasiyana muhupenyu hwemunhu. Zvimwe zvinhu zvechadenga zvinosanganiswa muRuambanyeredzi zvisiri zvindeya iZuva ne Mwedzi, uye Rinopasi rinobviswa.
Ruambanyeredzi inotanga nezuva yoenda kuMwedzi yozo tanga kutarisa nekutsanangura zvindeya nesimba zvazvinazvo pamunhu nehunhu hwemunhu. Chindeya chimwe nechimwe chine chiratidzo (saini -> sign) chinobatanidzwa nacho (zvindeya zvinotonga masaini).
9 Mabviro eruzivo
Nyamatsatse[chinja | edit source]
Nyamatsatse inotonga maratidzo maviri Mhandara kana Vhego (Virgo) naMamanga kana Jemano (Gemeni). Muruambanyeredzi nyamatsatse inomirira njere (kana pfungwa; 'kuva nemusoro'). Saka inoratidza matauriro anoita munhu, mafungiro emunhu wacho nezvekuti anofunda sei uye zvekuti zvifundo zvinopinda sei muuropi. Nyamatsatse inotaridza magadziriro nemasikiro atinoita zvinhu pachedu, nemafungidziro atinoita. Zvinhu zvakaita sekuti, tinonyora pasi tichifunga here, kana kuti, tinotaura kana tichifunga, uye kana kuti hatifunge zvakakwana kana kuti tinofungisisa, zvese zvinotaridzwa naNyamatsatse.
Mashoko anobatanidzwa neNyamatsatse muruambanyeredzi:
kuva nemusoro; pfungwa
Kufunda (kana kudzidza)
Chiratidzo kana chikwangwani (symbol) yeNyamatsatse muRuambanyeredzi.
Mhandara kana Vhego - chiratidzo cheRuambanyeredzi, inotongwa naNyamatsatse.
Mamanga kana Jemenai (Gemini) yeRuambanyeredzi inotongwa naNyamatsatse.
Hweva[chinja | edit source]
Hweva muruambanyeredzi anotonga nyeredzi kana zviratidzo zviviri, Handira kana Torisi (Tauras) na Pima kana Ribhura (Libra). Muruambanyeredzi Hweva anomirira runako, tunonaka, nekushamwaridzana. Hweva muchati (chart) yemunhu inoratidza tunhu tunofarirwa nemunhu iyeye nezvinhu zvaanenge achifunga kuti zvakanaka, uye zvinhu zvavanokwezva, uye mapindiro avanoita murudo. Hweva ndevezvemufaro, kuda munhu nekudiwa, kukwezva nekukwezviva, kuroora, ushamwari nekupfava kwemoyo. Uyezve anomirira mari, nekubatanidzwa kwevanhu kana zvinhu / kushanda nevamwe.
Mashoko ezvaHweva muruambanyeredzi:
Rudo ne Kudanana
Useza kana unyanzvi (art; creation; skill)
Chimiriro kana chikwangwani cheHweva muRuambanyeredzi.
Handira kana Torisi (Taurus) nyenyedzi kana ratidzo yeRuambanyeredzi inotongwa naHweva.
Pima kana Ribhura (Libra) ratidzo / nyenyedzi yeRuambanyeredzi inotongwa naHweva.
Mrongazuva[chinja | edit source]
Murongazuva muruambanyeredzi anotonga nyereedzi kana ratidzo inonzi Hondowe kana Erisi (Aries). Anomirira chikamu chedu chinoita senge mhuka, hasha dzedu, kuda kwedu kwekukwikwidza nesimba redu rekuita zvinhu tichipedza. Uye shungu, moto urimoyo nekusatya. Madiro anoita munhu chinzvimbo, marwiriro anoita munhu kuti awane chinhu zvese zvinotaridzwa naMrongazuva. Mrongazuva anoita kuti vanhu vanatso shanda, uyeshandiro avo anoratidzwa naMrongazuva futi. Makudziro nekuzvitakura kunoita munhu, nezvese zvebonde zvinotaridzwa naMrongazuva. Ndoosaka Mrongazuva achinzi chindeya cheShungu.
Mashoko ezvaMrongazuva muruambanyeredzi:
Mrongazuva chindeya cheRuambanyeredzi.
Chimiriro kana chikwangwani cheMrongazuva muRuambanyeredzi.
Erisi kana Erisi (Aries) nyenyedzi / ratidzo yeRuambanyeredzi, inotongwa naMronguzava.
Nyavada kana Skopisi kana Skopiyo (scorpio) kudhara yaitongwa naMrongazuva.
Vhenekeratsvimborume[chinja | edit source]
Nekuti zita raVhenekeratsvimborume rirefu, richapfupiswa kunzi: Vheneke kana kuti Tsvimborume.
Muruambanyeredzi anotonga nyenyedzi kana chiratidzo chinonzi Uta kana Sajiterisi (Sagittarius), na Hove kana Paishisi (Pisces). Pamusoro pezvo anomirira tariro, kuvimba nekukura kwemunhu. Inoratidza kuti munhu anowana mufaro ne chirongwa chohupenyu sei, uyezve anotaridza kuti ndepapi muhupenyu hwemunhu pavano vana rombo rakanaka. Zvakadaro, Vheneke anotaridza kufunda kwemunhu, mafungiro makuru, kunamata, uchenjeri nenjere dzemunhu. Kubudirira newana kwemunhu, kufamba nyika, uye Vheneke mutongi. Anoratidza hupfumi futi.
Mashoko ezveVheneke muruambanyeredzi:
Kukura; kuwanda kwezvinhu
Chimiriro kana chikwangwani yaVheneke muRuambanyeredzi.
Mseve kana Sajiterisi (Sagittarius) inyenyedzi kana ratidzo rinoshandiswa muRuambanyeredzi uye rinotongwa naVheneke.
Hove kana Paishisi (Pisces) imwe nyenyedzi inoshandiswa muRuambanyeredzi, uye yaimbotongwa naVheneke.
Chiremera[chinja | edit source]
Chirema kana Chiremera muruambanyeredzi anotonga nyeredzi kana ratidzo rinonzi Mbudzi kana Kapurikoni (Capricorn) na Rongo kana Akwarisi (Aquarius)  Pamusoro pezvo anomirira chirango, kudzorwa / kurambidzwa muhupenyu, mutemo uye anoreva chokwadi. Inomirira zvipingamupinyi futi nebvuvano (ma-responsibilities) dzemunhu, maitiro avanoita zvinhu zvakakosha. Chiremera anotaridza mabatiriro anoita munhu zvinhu zvakokasha futi. Chiremera mufundisi (kana mudzidzisi) uye anomirira vaye kana zvinhu zvine simba kwatiri kana zvakakudzwa.
Mashoko ezvaChiremera muruambanyeredzi:
Mutemo; chitangara (chimiro; structure)
Chisungo ne ndima
Rombo rakanaka (asi rinotora nguva nekushanda)
Chimiriro kana chikwangwani yaChiremera muRuambanyeredzi.
Mbudzi kana Kapurikoni (capricorn) nyenyedzi kana saini rinoshandiswa muRuambanyeredzi, uye inotongwa naChiremera.
Chirongo kana Akwarisi (Aquarius) nyenyedzi kana saini inoshandiswa muRuambanyeredzi. Kare yaitongwa naChiremera.
Yuranisi[chinja | edit source]
Muruambanyeredzi Yuranisi anotonga chiratidzo chinonzi Chirongo kana Akwarisi (Aquarius). Pamuso pezvo anomirira shanduko kana kuva nezano isina kurongerwa. Zvinhu zvisingatarisirwi kana kurongerwa. Muchati yemunhu Yuranisi anoratidza nguva inoitika kana yakaitika zvinhu zvakange zvisina kurongerwa. Yuranisi anoratidza kuva nepfungwa yakavhurika. Yuranisi ndeye zvinhu zvese zvizve rusununguko, nyika yese, kubatsirana, kuva nemutsa / tsitsi.
Mashoko ezveYuranisi muruambanyeredzi:
Kutangira/ zvinhu zvitsva (originality)
Yuranisi (Uranus) Chindeya.
Chimiriro kana chikwangwani yeYuranisi muRuambanyeredzi.
Chirongo kana Akwarisi (Aquarius) inyenyedzi inoshandiswa muRuambanyeredzi uye inotongwa naYuranisi.
Neputoni[chinja | edit source]
Neputoni muruambanyeredzi anotonga nyeredzi kana ratidzo rinonzi Hove kana Paishisi (Pisces). Neputoni anomirira ndoto nengano muhunhu hwedu (nyangwe muhupenyu hwedu). Pamusoro pezvo anomirira zviroto, manzwiro (kana intuition) nefungidziro dzedu (kana imagination). Uyezve, inomirira zviroto zvemunhu kuzvinyepera (delusions) kwemunhu - nepavane unyanzvi hwekusika. Mafungiro asiri mubhokisi uye mafungiro asina kudzorwa. Nhetembo, mhanzi, nekutamba zvese zvinhu zvechisiko zvinoratidzwa naNeputoni, uye kuzarirwa nemanzwiro.
Mashoko ezveNeputoni muruambanyeredzi:
Neputoni (Neptune) chindeya.
Chimiriro kana chikwangwani yeNeputoni muRuambanyeredzi.
Paishisi kana Paishisi (Pisces) inyenyedzi kana saini inoshandiwa muruambanyeredzi, uye inotongwa naNeputoni.
Pwuto[chinja | edit source]
Pwuto chindeya chidiki, uye muruambanyeredzi chinotonga chiratidzo chinonzi Nyavada kana Skopisi; Skopiyo (Scorpio). Pwuto anomirira simba nekukwira mumaitiro, uye inoratidza mashindiro anoita munhu simba raanaro, kuchinja kwatinoita muhupenyu. Pwuto rinomirira rufu nekuzvarwa futi (rebirth). Pwuto ndeye kuzvidzora muhupenyu, anomirira kupara kwezvinhu, kubatikana neshungu. Pwuto anoti "zvekare zvoenda zvitsva zvopinda", uye unofanhira kugadzirira zvinoteera zvacho.
Mashoko ePwuto muruambanyeredzi:
Kushanduka; kukura (kuchinja)
Ruzvarwo; kuzvarwa futi
Pwuto (Pluto) chindeya.
Chimiriro kana chikwangwani yePwuto muRuambanyeredzi.
Nyavada kana Skopisi (Scorpio) kana S'kopiyo inyenyedzi kana ratidzo indoshandiswa muRuambanyeredzi, uye inotongwa naPwuto.
↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Labyrinthos, 27 Ndira 2018, 'Chirevo cheZvindeya muAs'tororoji, Chimiriro cheChindeya neBepa reKubiridzira', Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Astrology.com, h.z, 'Zvindeya',funda. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 3.0 3.1 Astrology.com, h.z, 'Nyamatsatse: Chindeya cheKutaurirana' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021.
↑ 4.0 4.1 Astrology.com, h.z, 'Hweva: Chindeya cheRudo neMari', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 5.0 5.1 Astrology.com, h.z, 'Mrongazuva: Chindeya cheShungu' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 6.0 6.1 Astrology.com, h.z, 'Jupita: Chindeya cheRombo rakanaka' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021.
↑ 7.0 7.1 Astrology.com, h.z., 'Sotani: Chindeya cheKhama' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 8.0 8.1 Astrology.com, h.z, 'Yuranasi: Chindeya chePanguko', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 9.0 9.1 Astrology.com, h.z, 'Neputoni: Chindeya cheZvisipo', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 10.0 10.1 Astrology.com, h.z, 'Puruto: Chindeya cheSimba', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvindeya_muRuambanyeredzi&oldid=93550"
This page was last edited on 14 Kubvumbi 2022, at 16:33.